Sida loo Edit playlist on iPhone Si fudud
Qaar ka mid ah dadka isticmaala sixiddiisa iPhone iyo Lugood playlist waxaa mar walba loo baahan yahay sida cilmi nafsiga aadanaha oo dalbaday in isbedelka cusub maalin kasta marayay oo la mid ah waxaa laga codsadaa in doorashada heeso. Waxa kale oo laga yaabaa in howl culus aya hortaala haddii aan la fuliyey iyadoo la raacayo shuruudaha barnaamijyada software-ka. Tutorial ayaa loo soo saaray si loo hubiyo in xaalada ayaa ah mid aan marnaba soo food saaray macaamiisha ah ee arrintan la xiriira si ay u qaban karaan playlist hawlaha la xiriira fudayd iyo qanacsanaanta. Si aad u hubiso in hawsha noqdo Screenshot khuseeya fudud sidoo kale lagu daray in hannaanka in halkan lagu si ay u sameeyaan hawsha xitaa fudud isticmaalayaasha. Waxaa xusid mudan in tafatirka playlist iPhone ee fudud oo degdeg ah hab tahay ujeedada ugu weyn ee qoraal tutorial iyo halkan ka user ma ka heli doonaa oo keliya saaxiibtinimo laakiin tutorial taasi ka dhigi doonaa wax fudud si ay u fuliso tallaabooyin si ay awoodaan u hesho in ay tayo wanaagsan iyo gacan ku haynta qalabka marka ay timaado iPhone ama iDevice kasta oo kale. Haddii user u arko iyo arrin oo dhib fulinta tutorial Haddaba waxaa lagula talinayaa in ay hesho talo khabiir in ay sii wadi iyo si aad u hesho natiijo fiican ee ugu macquulsan.
Qeybta 1: Edit iPhone playlist la Lugood
Qeybta 2: nidaameed in Lugood
Qeybta 3: Samee playlist in Lugood
Qeybta 4: Edit iPhone playlist la TunesGo Si fudud Retro oo dhakhso ah
Lugood waa barnaamij software cajiib ah u saamaxaya in ay isbedel aan wax dhibaato ah la sameeyo. Waxaa sidoo kale in la xuso in Lugood waa barnaamij software badan loo a isticmaalka wax ku ool ah taas oo ka dhigaysa hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa ugu dhaqsiyaha badan. User xaq u baahan yahay si loo hubiyo in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa hab farsamo si playlist ee tafatirka iPhone ma aha arrin soo adkaata oo dhan. Ka dib markii yihiin tallaabooyinka qaar ka mid ah oo ku lug leh arrintan la xiriira.
User 1. baahan yahay in ay ku xidhmaan iPhone ama iDevice kasta oo la PC ka dhex cable USB ah si nidaamka dhaliya.
Software 2.Beerta Lugood waxaa markaas in la bilaabay.
User 3.Beerta u baahan yahay si ay u helaan qalab gudahood uu furmo suuqa ugu weyn adigoo riixaya icon ku habboon.
4.Within qaybta music iyo hoos ikhtiyaarka playlist user ka bedeli kartaa magaca playlist ah.
5.The playlist waxaa markaas in la furay gudahood Lugood uu furmo suuqa ugu weyn.
6.The songs in user uusan dooneyn in ay iPhone waa la tirtiri karaa.
7.By isticmaalo geedi socodka ka mid ah ee kor ku user playlist karo iDevice kasta oo uu doonayo in uu.
Si aad u hubiso in playlists iPhone yihiin synced geedi socodku waa cadaalad ah oo fudud oo waa sida soo socota.
User 1. leeyahay in ay ku xidhmaan iDevice la computer ka dhex cable USB ah.
Software 2.Beerta Lugood waa ka dibna in la bilaabay iyo qalabka waa in ay ku yaalaan.
3.Once waxaa la sameeyaa ka guddi bidix music guddi qalabka waa in la heli.
4.The ka dib markii laba fursadaha ay tahay in la soo xulay si ay u hubiyaan in music ku saabsan iPhone waxaa synced la Lugood, kaas oo sidoo kale ka baxayo geedi socodka.
Nidaamkan waxaa sidoo kale loo yaqaan by kasta user iyo sabab la mid ah sidoo kale waa mid aad u fudud oo toos ah. Ka dib markii qaar ka mid ah tallaabooyinka ay ku lug leeyihiin arrintan la xiriira.
Barnaamijka software 1. Lugood waa in la bilaabay.
2.Once waxaa la sameeyaa file Jidka> cusub> playlist cusub ay tahay in la raaco.
3.Beerta playlist waxaa markaas in loo magacaabo.
4.The playlist waxaa markaas in la saxar ah.
5.On geeska kore ee midigta user ay u baahan tahay in la hubiyo in icon ee music add waxaa taabtay ka dibna "qabtay" button waa in la sii adkeeyey dhammayn nidaamka.
Qeybta 4: Edit iPhone playlist la TunesGo
Waa mid ka mid ah barnaamijyada software ugu fiican oo aad u hubiso in playlists waxaa saxar iyo abuuray oo aan wax dhibaato ah. Soo diyaariyay Wondershare barnaamijka sidoo kale uu awood u leeyahay inuu wax badbaadiyo oo lagu wareejiyo playlists in ay iDevices kale ama xitaa android. Shaqeynta ah ee barnaamijka waa internet-bannaan oo u sabab la mid ah dadka jecel in ay isticmaalaan barnaamijka oo mar walba waxaa lagu qiimeeyaa sare. Muuqaaladan oo ka mid ah barnaamijka iyo aad u weyn oo halkan ay hubiso in sida ugu fiican loo dhiibaa in dadka isticmaala ay wax dib u dhac iyo qalad aan sameeyo. Interface ayaa smart ee barnaamijka waa u fududahay in la isticmaalo iyo kuwa isticmaala inay hubiyaan in software waxay u shaqaysaa ay aad ugu fiican ka dib markii iyada oo hage ah in la soo sheegnay doonaa tutorial akhrintiisa ka dhigi kara. Ka dib markii qaar ka mid ah muuqaalada barnaamijka oo isticmaala inay tixgaliyaan.
Waa 100% khatar iyo baadi lacag la'aan ah maadaama ay jirto technology daruur ku lug lahayn oo ku dhiirigelinayaan in uu casriyeeyo barnaamijkan si joogto ah.
Barnaamijku waa fududahay in la isticmaalo marka la barbar dhigo kuwa la midka ah ee suuqa.
Software Tani waxay sidoo kale waxaa laga heli karaa lacag la'aan ah oo mudo tijaabo ah oo aan sabab la mid ah saamaynta shirkadda Go'aamada wax iibsiga ee ka masuulka ah.
Si wanaagsan u isticmaasho barnaamijka soo socda waa tutorial ka faahfaahsan oo ku saabsan arrinkan.
User 1. baahan yahay si loo hubiyo in version maxkamad barnaamijka la soo bixi http://www.wondershare.com/tunesgo/ oo ay tahay in lagu xiro oo bilaabay ka dib markii raacaya tilmaamaha faahfaahsan.
2.Beerta iDevice markaas waa in lagugu xiro computer la cable ee USB asalka ah si barnaamijka waxa lagu ogaadaa. Xaaladdan oo kale ma jiraan wax la ogaado barnaamijka waxa uu ku taliyay in la hubiyo in barnaamijka dib-bilowday ka dib markii ay ku dhow.
3.Under Jidka Media> playlist user awood u yeelan doonaan in ay playlist iPhone jir in barnaamijka uu ka dareemo.
User 4.The u baahan yahay si loo hubiyo in button Add la riixi ku darto heeso cusub iyo badhanka delete sidoo kale lagu riixi kartaa si aad u hubiso in ay heeso hore u joogo qalabka la tirtiray sida ay tahay sida ugu fudud si ay u hubiyaan in playlist on iDevice la saxar sida dooni user oo ay damac.
> Resource > iPhone > Sida loo Edit iPhone playlist fudud oo dhakhso ah